မြောက်ကိုရီးယား - ရုရှားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆေ? - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယား – ရုရှားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆေ?
ဆိုးလ်၊ ဧပြီ ၂၅
ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ပထမဆုံးနှစ်နိုင်ငံထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နှင့် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်တို့သည် နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေး၊ စီးပွား ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် နျူကလီးယားလက်နက် ဖျက်သိမ်း ရေးတို့အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်း ဆောင်ကင်သည် အမေရိကန်နှင့် နျူုကလီးယားအရေး တုံ့ဆိုင်း နေချိန်တွင် ရုရှားနှင့်နီးကပ်သည့် ဆက်ဆံရေးကို ရှာဖွေနေသည်ဟုဆိုကြသည်။
ခေါင်းဆောင်ကင်သည် နယ်စပ်ရှိခါဆန်မြို့ကို ဖြတ် ကျော်ခဲ့ပြီး နောက် ဧပြီ ၂၄ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ သီးသန့်လက်နက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားသည့်ရထားဖြင့် ရုရှားအရှေ့ပိုင်းရှိ ဗယ်ဒီဗိုစတော့မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ သုံးရက်ကြာခရီးစဉ်တွင် ရုရှား၏ ပစိ ဖိတ်ရေတပ်ဌာနချုပ်၊ အစားအစာစက်ရုံများ၊ ခရီးသွားများ အကြား ကျော်ကြားသည့်အဏ္ဏဝါ ပြတိုက်တို့သို့ သွားရောက်လည် ပတ်နိုင်သည်ဟု သံတမန်အရင်း အမြစ်များကိုကိုးကားပြီး တောင်ကိုရီးယားသတင်းများကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဟနွိုင်းမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် ရလဒ် ပိုင်းအရ မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက် ခေါင်းဆောင်ကင်၏ ပထမဆုံး သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဟုမှတ်ယူနိုင်ပြီး အိမ်နီးချင်းရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ထံမှ သြဇာအကာအကွယ်ရရှိရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာအကျိုးအမြတ်များကို ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးအတွက် ”ချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားသည့် သံခင်းတမန်ခင်း”ကို မြောက်ကိုရီးယားက အသုံးချလိုက်သည်ဟုဆိုကြသည်။ မြောက်ကိုရီးယားအတွက် ရုရှားသည် လမ်းကြောင်းအသစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသောကိစ္စမှာ ခေါင်းဆောင်ကင်၏ နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်းထဲ၌ အရိပ်အြ>ွမက် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ခေါင်းဆောင်ကင်ကအကယ်၍ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ် အ မေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ဖိအားများကို ဆက်လက်ထားရှိ နေဦးမည်ဆိုပါက တခြားလမ်း ကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေမည်ဟုဆိုထားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် နှစ်ရက်အတွင်း မီးလောင်မှု သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွား